Medusa, oo ah masaska madaxa ku jira | Safarka Absolut
Medusa, kan abeesooyinka madaxa ku hayaan
Medusa Isagu waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan uguna xiisaha badan sheekooyinka Giriigga. Waxay ahayd mid ka mid ah saddexda goon, oo ay weheliyaan Stheno iyo Euryale, oo ah kan kaliya ee ka mid ah seddexda gabdhood ee walalaha xun ee aan dhiman karin.
Yey ahaayeen gorgorradii? Xayawaanadan bahalnimada ah ee ay Giriiggu ka cabsan jireen waqtiyadii hore waxay ahaayeen haween baalal leh oo halkii ay timo madaxooda ka lahaan lahaayeen abeesooyin nool. Si kastaba ha noqotee, tani ma ahayn tii ugu baqdinta badnayd iyaga. Waxa ugu xumaa ayaa ahaa in, sida laga soo xigtay halyeeyga, kuwii ku dhiiraday inay eegaan indhahooda ayaa isla markiiba loo rogay dhagax.
2 Perseus iyo Medusa
Way fududahay in la qiyaaso cabsida ay abuureyaashani ay tahay inay ku dhiirrigeliyaan Griiggii waqtigaas jiray, kuwaas oo u qaatay dhammaan quraafaadyadii hore wax aan u qalmin. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa inay ahayd wax aad loogu kalsoonaado in la ogaado in gorgorku ku nool yahay meel fog. Daaran jasiirad fog oo la yiraahdo Sarpedon, sida ku xusan dhaqamada qaar; ama, sida ay dadka kale qabaan, meel ayaa ku lumay Lybiya (kaas oo ahaa waxa Giriiggu ugu yeeri jireen qaaradda Afrika).
Gorgorku waa Gabdhaha Forcis iyo Keto, laba ka mid ah ilaahyada horudhaca ah ee ku dhex jira cilmiga adag ee Giriigga.
Saddexda gabdhood ee walaalaha ah (Stheno, Euryale iyo Medusa), waxay heleen magaca górgonas, taas oo macnaheedu yahay, "cabsi". Kuwaas baa la yidhi dhiiggiisa wuxuu lahaa awood uu ku soo nooleeyo kuwii dhintay, inta laga soo saaray dhanka midig. Taabadalkeed, dhiiga bidix ee gorgonku wuxuu ahaa sun halis ah.
Bust of Medusa oo uu sawiray Gian Lorenzo Bernini 1640. Sawirkan weyn ee Baroque waxaa lagu hayaa Matxafyada Capitoline ee Rome.
Isagoo si gaar ah uga hadlaya Medusa, waa in la sheegaa in magaceedu ka yimid ereygii hore ee Griiga Μέδουσα oo macnihiisu yahay "ilaaliye".
Waxaa jira halyeey daahay oo u nisbeeya Medusa asal ka duwan kan labada gogol ee kale. Marka tan la eego, Medusa waxay ahayd gabadh qurux badan oo yeelan lahayd ka xumaaday ilaahadda Athena nijaaseynta mid ka mid ah macbudyada iyada loo daahiriyey (sida uu sheegayo qoraaga reer Roman ee Ovid, wuxuu la galmoon lahaa ilaah) Poseidon meesha quduuska ah). Kan, daran oo aan naxariis lahayn, ayaa lahaan lahaa waxay timaheeda u badashay masaska ciqaab ahaan.
Khuraafaadkii Medusa ayaa in badan ku jilay shaqooyinka farshaxanka laga bilaabo Renaissance ilaa qarnigii XNUMXaad. Waxaa laga yaabaa in midka ugu caansan uu yahay rinjiyeynta saliida ee Caravaggio, oo lagu rinjiyeeyay 1597, midka lagu muujiyay sawirka madaxa ka dhigaya boostada. Waqtiyadii ugu dambeeyay, tirada Medusa waxaa sheeganayay qaybo ka mid ah dumarka inay astaan ​​u tahay kacdoonka haweenka.
Perseus iyo Medusa
Caddooyinka Griigga magaca Medusa wuxuu si aan macquul ahayn ugu xiran yahay kan Perseus, dilaaga bahalnimada iyo aasaasaha magaalada Mycenae. Geesigii noloshiisa dhameeyay.
Danae, hooyadii Perseus, ayaa sheegtay Polydectes, boqorka jasiiradda Seriphos. Si kastaba ha noqotee, geesigii yaraa ayaa dhex istaagay. Polydectes waxay heshay dariiq looga takhaluso caqabadan dhibka badan iyadoo loo diray Perseus howl aan qofna nolol ku laaban karin: safarka Sarpedon iyo madaxa Medusa keen, gorgonka kaliya ee dhimanaya.
Athena, oo wali u xanaaqsan Medusa, waxay go'aansatay inay ka caawiso Perseus dadaalkiisa adag. Marka wuxuu kula taliyay inuu raadsado Hesperides oo uu ka helo hubka lagama maarmaanka u ah jabinta gorgon. Hubkaasi wuxuu ahaa a dheeman dheeman iyo koofiyad uu siiyay markii uu gashanayay awoodda aan la arki karin. Wuxuu sidoo kale ka helay boorso awood u leh inay si ammaan ah ugu jirto madaxa Medusa. Maxaa intaa ka badan, Hermes amaahday Perseus uu kabaha baalasha leh si ay u duusho, halka Athena qudheeda ay ku deeqday muraayad weyn oo gaashaan leh.
Perseus oo haya madaxa madaxa laga gooyay ee Medusa. Faahfaahinta sawir gacmeedka Cellini, ee Piazza de la Signoria ee ku taal Florence.
Oo ku hubaysan qalabkan xoogga badan, Perseus wuxuu u dhaqaaqay inuu la kulmo gorgorrada. Nasiib wanaagse, wuxuu helay Medusa oo dhex hurda godkeeda. Si looga fogaado indhaheeda taas oo kuu oggolaan doonta rajo la'aan, geesigu wuxuu adeegsaday gaashaan ka turjumaya sawirka gorgon sida muraayadda oo kale. Sidaas ayuu ku awooday inuu horey ugu sii socdo iyadoon wajiga laga fiirin oo madaxa laga gooyay. Laga soo bilaabo qoorta goysay wuxuu ku dhashay faraska baalasha leh ee Pegasus iyo nin weyn oo la yiraahdo Chrysaor.
Markii ay ogaadeen waxa dhacay, gorgorradii kale waxay u dhaqaaqeen inay baacsadaan gacan ku dhiiglaha walaashood. Markaas ayay Perseus adeegsatay koofiyaddiisa aan la arki karin si uu uga cararo oo uu u badbaado.
Astaanta madaxa madaxa looga jaray ee Medusa waxaa loo yaqaan Gorgoneion, taas oo ka muuqata wakiillo badan oo ku saabsan gaashaanka Athena. Giriiggii hore waxay adeegsan jireen qardhaasyo iyo sawirada madaxa Medusa si looga ilaaliyo nasiib xumada iyo isha xun. Horeba waqtiyadii Hellenistic-ka, Gorgoneion wuxuu noqday sawir siweyn loogu adeegsado mosaicsiyada, ranjiyeyaasha, dahabka iyo xitaa lacagta birta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Medusa, kan abeesooyinka madaxa ku hayaan
Tudor wuxuu kacay, ubaxa qaranka England
Gunnada kirismaska ​​novena, midowga qoyska
Kusoo biir Absolut Viajes oo bilaash ah kuna hel e-maylkaaga wararkii ugu dambeeyay ee safarka iyo dalxiiska.